Monday December 21, 2009 - 11:57:11 in Recent Stories by Super Admin
Arbaco, December 23, 2009(HOL): Qof walba oo damiir leh waxaa la gudboon in uu ka qeybqaato gurmadka lagu badbaadinyo labadan gabdhood oo dhashay iyagoo caloosha isaga dhegan.
Labadan Gabdhood oo sanad iyo labo biilood jir ah waxay ku dhasheen Magaalada Mombasa ee dalka Kenya, haatanna waxay ku jiraan Isbitaalka Kenyata National Hospital ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu sii hayo inta looga helayo qalliin lagu kala saarayo.
Hooyada dhashay labadan Gabdhood oo lagu magcaabo Canab Afrax Xuseen ayaa u sheegtay HOL in muddo ku dhow sanad ay dhaqaatiirta Isbitaalka Kenyata ay marba waqti u qabanayaan iyagoo leh bisha dambe ama labo bil kaddib ayaan fiirineynaa in qallin lagu sameyn karo labada gabdhood iyo in kale.
“Dhaqaatiirta ilaa iyo haatan waa ay na siin la’ yihiin wax warbixin ah oo ku saabsan xubnaha ay wadaagaan gabdhaha marka laga reebo in la arkayo in ay wadaagaan bu’da caloosha”ayay tiri oo laga dareemayay in ay aad u jeclaan lahayd in ay mar uun aragto gabdhaheeda oo qalliinkooda lagu guuleystay isla markaana si caadi ah u nool.
Waxay sheegtay in ay taasi u sii dheer tahay in haddiiba ay Isbitaalka kala bixi lahayd gabdhaheeda ay Dhaqaatiirta Isbitaalka ka doonayaan lacag ay ku sheeganayaan taasi oo uga baxday xanaano ay labada gabdhood isbitaalka gudahiisa ugu sameynayeen muddo sanad ku dhow.
“Shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Allaah wax siiyay waxaan ka codsaneynaa in ay nagu saacidaan sidii aan gabdhaheena ugu heli lahayn qalliin lagu saarayo, waayo annaga awooddaas ma lihin” ayay mar kale tiri
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Kenya Maxamed Cali Ameerika oo saaka Isbitaalka Kenyata ee magaalada Nairobi ku booqday labada gabdhood ee isku dhegan ayaa wuxuu ballanqaaday in uu Dhaqaatiirta kala hadli doono sidii gabdhaha qalliin dibadda ah loogu qaadi lahaa bacdamaa aysan arrintooda waxba ka qaban karin, isagoo rajeeyay in uu arrintaas ku guuleysan doono.
Safiirka oo si weyn uga calool xumaaday xaaladda ay ku nool yihiin labada gabdhood ayaa sheegay in Safaaradda Soomaaliya ay intii karaankeeda ah gacan ka geysan doonto sidii qalliin loogu heli lahaa labadaas gabdhood.
Maalinta berri ah ayaa waxaa Isbitaalka Kenyata ku ballansan Dhaqaatiirta Isbitaalka iyo Safiirka, iyadoo ay ka wada hadli doonaan sidii xayiraadda looga qaadi lahaa gabdhahaas oo marka laga soo tago in ay isku dhegan yihiin sida kale aan xanuun ku dhegan qabin.
Cid kasta oo dooneysa in ay gacan ka geysato qalliinka lagu sameynayo labadan gabdhood waxay la xiriiri kartaa:
Caabiyo Ciise oo laga helo 612-298-1044 Minneapolis Minnesota
Ama Cabdi Muuse Maaxaay oo lagala xiriiri karo 507 990-9445 ama emailka maaxaay@gmail.com.
Hooyada dhashay labadan gabdhood oo lagu magacaabo Canab Afrax Xussen waxaa lagala xiriiri karaa taleefoonka 00254722233873